လန်ဒန်မီးရထား ဘူတာရုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး လန်ဒန်မီးရထား ဘူတာရုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
LONDON, ENGLAND - JUNE 11: Commuters wait to boardatube train in Clapham Common station on one of the few London Underground services operating through the RMT Union's tube strike on June 11, 2009 in London, England. A 48 hour strike began at 7pm on Tuesday after discussions over pay and working conditions between London Underground bosses and the RMT Union failed to reachaconclusion. (Photo by Oli Scarff/Getty Images)
လန်ဒန်မြို့ အနောက်တောင်ပိုင်းက မြေအောက်ဘူတာရုံမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့လို့ အများပြား ဒဏ်ရာခဲ့ရပါတယ်။
ဖူလ်ဟမ်မြို့က ပါဆွန်ဂရင်ဘူတာရုံမှာ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို အတိကျမသိပေးဘူးလို့ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောပါတယ်။
မျက်မြင်သက်တွေရဲ့ အဆိုအရ ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် မျက်နှာကို ဒဏ်ရာရမှု အပါအဝင် အများအပြား ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မီးရထားအတွင်း ပိုင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ မီးရထားကို ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဒဏ်ရာရသူတွေ အများစုကို ဆေးရုံတင်ပို့မှုတွေ လုပ်ထားသလို ပေါက်ကွဲမှုမှုနဲ့ အတူ မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တာကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ငြိမ်းသတ်နေရပါတယ်။
လနျဒနျမွို့ အနောကျတောငျပိုငျးက မွအေောကျဘူတာရုံမှာ ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့လို့ အမြားပွား ဒဏျရာခဲ့ရပါတယျ။
ဖူလျဟမျမွို့က ပါဆှနျဂရငျဘူတာရုံမှာ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာ ၁၅ ရကျနကေ့ ပေါကျကှဲခဲ့တာဖွဈပွီး ပေါကျကှဲမှု ဖွဈရတဲ့အကွောငျးကို အတိကမြသိပေးဘူးလို့ အကွမျးဖကျတိုကျဖကျြရေး ရဲတပျဖှဲ့ ကပွောပါတယျ။
မကျြမွငျသကျတှရေဲ့ အဆိုအရ ပေါကျကှဲမှုတှကွေောငျ့ မကျြနှာကို ဒဏျရာရမှု အပါအဝငျ အမြားအပွား ဒဏျရာရခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ မီးရထားအတှငျး ပိုငျးမှာ ပေါကျကှဲမှုဖွဈပျေါခြိနျမှာ မီးရထားကို ရပျတနျ့ခဲ့ရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာ ဒဏျရာရသူတှေ အမြားစုကို ဆေးရုံတငျပို့မှုတှေ လုပျထားသလို ပေါကျကှဲမှုမှုနဲ့ အတူ မီးလောငျမှုဖွဈခဲ့တာကို မီးသတျတပျဖှဲ့က ငွိမျးသတျနရေပါတယျ။
Previous articleရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမူဘောင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ် (ရုပ်/သံ)
Next articleဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှရစ်ရဲ့ အယူခံကို ပါကစ္စတန်တရားရုံးချုပ် ပယ်ချ